Makoreti 18 nemakore pamwe nemunhu mukuru paIndaneti - 340 mifananidzo yepaIndaneti
Makontioni 18 plus
Tinokutaurira hutsva hutsva hwemifananidzo ye 18 pamwe chete paIndaneti kubva ku1990 kusvika ku2017 gore rekusunungurwa kwemifananidzo yakavezwa, zvichibva pane imwe nzvimbo yemafiropu. Kazhinji, munhu katuni kwemakore zvose, kazhinji vechiduku havaoni zvakanaka nzvimbo nevakura.
kuru > 18 +
Nyaya dzakawanda dzezvinyorwa zvisingabhadharwi mumutauro weRussia, pasina ruzivo rwemutauro unogona kuwana kunzwisisa kwemifananidzo pamusoro pemafambiro evanhu. 21 mapikicha kuvanhu vakuru vari kuwana mukurumbira, chido chekukwegura kwemakore chinomuka pakarepo kubva mukuzarurirwa kwevanhu vemaanime. Mipera inoguma mumitambo yemusango ndeimwe yezvisarudzo zvekuti iwe uzorore? Zvaunoda mapikicha zvichaonekwa mumifananidzo isina kujairika. Ndaida kuona kuti Rapunzel aifara sei, achivhiringidzika panguva yejasi rebvudzi regoridhe - ndapota! Vafambi vemashiripiti vachada vhidhiyo yevanhu vakuru.
Comic for adults pasina kubhadhara
Comic for Videos Vakuru
Tinopa Website vashanyi pamusoro 18 makore kuti asanetseka, uye murinde mabhuku edu enyambo kuti vakuru, pane kusawirirana nezvokuti kukura kunouya wakakwana, kazhinji pfungwa iyi 21 gore rwakavapo kumavirira, kuRussia-kutaura kwevanhu inoomerera shoma zera riri kudzika kupfuura US.